Izinwele kudinga ukunakekelwa njalo. Izinhlelo humidification ukwelashwa, ukudla kanye nokuqinisa ikhono lokwenza ngisho enhle kunazo ubunjalo izinwele zikanokusho ngempela.
Kwenye yezingxenye ebalulekile ukunakekelwa kuyinto namafutha izinwele. Lokhu kusho ivikeleke kakhulu ekulimaleni mechanical, singavumeli ukuba nenkinga enkulu futhi abenze esilalelayo. Kuyinto kahle kuqinisa izinwele ezilimele, kuthuthukisa kuyaqina yabo, ekuvimbeleni brittleness, okuholela nezinwele.
Izinwele Amafutha kuhlanganisa izithako zezimonyo, izinto zokwelapha kanye ezikhishwe engokwemvelo amakhambi emvelo nezinye izitshalo ewusizo. Ngaphezu kwalokho, ukubunjwa yabo ingase ihlanganise ceramides, amavithamini, amino acid, amaprotheni, ukuhlinzeka izinwele nokudla okuthe xaxa. Ukutholakala izithako zihlanganisa acid organic, waxes futhi amafutha ethereal, inhlaka unikeze umphumela zokuzivikela ngokubheja bonke ubuso ungqimba ezondile sivala ekhethekile, kuqinisekisa ubuqotho isakhiwo esekela ezingeni kahle umswakama futhi usiza ukuqinisa izinwele. Plant okukhishwe kangcono ukusiza inkinga ka nezinwele, njengoba beqinisa kahle follicle izinwele, normalizing izinqubo umzimba ezenzeka kubo.
Khetha conditioner izinwele kuyadingeka, ngesisekelo izici ezifana: uhlobo, ubude, ukuminyana, amandla (noma okuphambene nalokho ubuthakathaka / fragility) nezinye izinkomba. Ngaphambi kokuba uthenge uqinisekise ukuthi ufunda ngokucophelela isichasiselo sikhungo.
You azi ukuthi namuhla emakethe ukuza amathuluzi amasha nsuku zonke izinwele ukunakekelwa. Yehluka nomunye ekwakhiweni izici nomthelela ku nokwakheka zinyakaze lokuhlushwa izinto asebenzayo, kanye nezinye izici. Ngakho-ke, ukukhetha kwabo kufanele athathwe ngokungathi sína ukuze kuzuzwe nomphumela ofiselekayo ungawoni siqu kwekhanda yabo efanayo.
balms Ikhishwa izinwele ngesimo si, okhilimu, uketshezi. Ngu uhlobo curls, okuyizinto izindlela, abasibekela evamile, omile futhi oily. Futhi kubhekelwe ekukhiqizeni izinwele ukuminyana, degree of rigidity. Ngakho-ke, imiyalelo kufanele kube somhlahlandlela kulesi sici. ukunakekelwa ngokukhethekile kuyadingeka ukukhetha namafutha izinwele abadinga ukunakekelwa okukhethekile, ababuthaka, ethambile, mncane, sibe namabala, ukushintsha kombala waquliswa ukuze perms zamakhemikhali. Kulokhu, kufanele ukhethe indlela nge wokuqukethwe lelisetulu izakhamzimba. Ngaphambi kwesikhathi ihlobo efiselekayo ukuthola namafutha ne UV-izihlungi.
Izinwele Amafutha kulula ukuyisebenzisa. Basuke isetshenziswa asanda wageza izinwele ezimanzi, esakaza izingalo bakhe bawelela ngaphesheya kwesifufula ubude bezihlikihla nokukhanya ukunyakaza isiyingi. Kusho ukuthi kudingeka ume imizuzu embalwa, bese hashaza ngamanzi ahlanzekile afudumele. Uma ufuna ukufeza umphumela ukunciphisa izinwele ezilimele, izindlela kungenziwa kwesokunxele kuya cwilisa isikhashana - amaminithi angafika ku-10. Lapho usebenzisa i-balms okwelapha basuke Kunconywa ukumelana amaminithi afika kwangu-25, kuyilapho ukudonsa cap izinwele azisonge ithawula. Ezinye balms angadingi uhlambulule.
Namuhla ethandwa kakhulu «ijuba» balms, «Elseve» futhi «Schwarzkopf». Kusukela abakhiqizi yasekhaya kufanele ukukhiqizwa "Green Mama" Inkampani futhi "umugqa Russian" kuphawula.
Uma ufuna ukwenza ibhalisamu ngenxa izinwele ngezandla zakho, ungasebenzisa iresiphi elandelayo.
Okunomsoco Amafutha ekhaya: isipuni shea ibhotela ukufuthelana ngendlela okugeza amanzi, yengezwe esilinganayo uju, isipuni emulsifying wax, 2 wezipuni apple cider uviniga, amaconsi ambalwa iyiphi amafutha abalulekile.
Lentulo ikhaya namafutha: e ubhamubhamu ikhasi sekugcineni nepepper 100 ml amanzi inaliti ukumnika. Ukuze bagcizelele in ingilazi ngosuku futhi abakhwabanisi.
Engamakhambi ikhaya namafutha: isipuni esigcwele chamomile, birch, clover, sembabazane, wort iSt John sika ukuxubanisa futhi uthele amafutha, engeza kalamula kancane. Sokunika ingxube ngesonto futhi abakhwabanisi, engeza emulsifying wax kancane kanye amafutha abalulekile.
Ukuhlaziya ebonisa ukuthi 25-OH vitamin D?
Primorsko-Akhtarsk: Phumula ogwini loLwandle Azov